1000pcs MOQ ထုံးစံအမှတ်အသားပြန်သုံးနိုင်သောစျေးဝယ်လက်ဆောင် kraft စက္ကူကုန်စုံအိတ်ဘရောင်း kraft စက္ကူအိတ်နှင့်လက်ကိုင်
Our MOQ 1000pcs, ကျနော်တို့စက္ကူအိတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်, အညိုရောင် / အဖြူရောင် kraft စက္ကူအိတ်၌စေ့စပ်, အဖြူကတ်ထူအိတ်, coated စက္ကူအိတ်, အနုပညာစက္ကူအိတ်, စသည်တို့.
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တောင်းခံထားသောအိတ်ပုံစံနှင့်အတူသင့်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်, အရွယ်အစား, အရောင်များကိုပုံနှိပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖော်ရွေရောင်းအားကနေပိုမြန်ကိုးကားရရန်အလို့ငှာအရေအတွက်!
ပစ္စည်းအမည် 1000pcs MOQ ထုံးစံအမှတ်အသားပြန်သုံးနိုင်သောစျေးဝယ်လက်ဆောင် kraft စက္ကူကုန်စုံအိတ်ဘရောင်း kraft စက္ကူအိတ်နှင့်လက်ကိုင်
အသုံးပြုမှု Present, စျေးဝယ် ,အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆုလက်ဆောင်,လက်လီအရောင်းဆိုင်များ, ထုပ်ပိုး, စသည်တို့.
ပစ္စည်း စက္ကူ coated, kraft စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, ကွမ်းခြံကုန်း, အထူးစက္ကူ, စသည်တို့.
အရောင် အပြည့်အဝအရောင်များ CMYK သို့မဟုတ် pantone အရောင်များ.
ကိုင်တွယ် ဖဲကြိုး, ဝါဂွမ်း, စစ, လိမ်, ချစ်တယ်, သေဆုံး, နိုင်လွန်ကြိုး, ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
Surface ပြီးပြီ spot uv, Matte သို့မဟုတ်တောက်ပြောင် lamination, သတ္တုပါးပုံနှိပ်, ဖောင်းကြွ, မင်္ဂလာပါ,ရွှေငွေငွေအတိမ်နှင့်စသည်တို့ကို.
အချိန်ကိုထုတ်လုပ်ပါ 15-25 ရက်ပေါင်း, သင်၏အရေအတွက်အရသိရသည်.
ထုပ်ပိုး 200 PC / Carton, သို့မဟုတ်ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အရသိရသည်
တင်ပို့ခြင်းနည်းလမ်း ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့်, လေကြောင်းဖြင့်, အမြန်ဖြင့်
နမူနာ 1). နမူနာအချိန်: အတွင်းမှာ 3-5 ရက်ပေါင်း.
2). နမူနာတာဝန်ခံ: ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အရသိရသည်.
3). ပြန်အမ်းငွေနမူနာ: 8000 pcs.
4). နမူနာပေးပို့: ယူပီအက်စ်, FedEx, DHL,
5). ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာနမူနာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, သင်တို့မူကားနမူနာကုန်တင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း 30% ကြိုတင် T / T ကသိုက်, 70% တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ T / T ကချိန်ခွင်လျှာ
L / C,D / A,D / P,ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ,Paypal,ဗီဇာ,ဒက်ဘစ်ကဒ်,အကြွေးဝယ်ကဒ်
FOB ဆိပ်ကမ်း ကွမ်ကျိုးသို့မဟုတ်ရှန်ကျန်း.
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကုန်သွယ်မှုစက်ဝိုင်းတွင်လူကြိုက်များသည်. သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါအိတ်များနှင့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်, စိတ်ကြိုက်အိတ်လည်းသံသယမရှိကြိုဆိုကြသည်.
အသုံးများသောစက္ကူပစ္စည်း, ကောင်းသောမာကျောမှုသည်အိတ်အားခိုင်မာစေသည်, 190gsm မှ 350gsm မှအထူ, ပုံနှိပ်အရောင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်.
Kraft စက္ကူခိုင်မာဆန့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်, အများအားဖြင့်အညိုရောင် / အဖြူရောင်အရောင်. 100gsm-350gsm မှအထူ, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1-2 အရောင်များ, ပမာဏကြီးမားလျှင်စျေးအသက်သာဆုံး option ကို.
အနုပညာစက္ကူအထူ 100gsm-300gsm ကနေနိုင်ပါတယ်, ပုံနှိပ်ခြင်းအတော်လေးကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်အဖြူကတ်ထူပြားကဲ့သို့မာကျောမဖြစ်နိုင်ပါ.
ငွေတံဆိပ်တုံးသို့မဟုတ်အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ပါသောအနက်ရောင်ကတ်ထူပြားသည်ကောင်းပေသည်, သင့်အတွက်အထူ 250gsm နှင့် 300gsm.
စက္ကူထုပ်ပိုးရန်သက်ဆိုင်သည်, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, ချောကလက်, ဝိုင်, အလှကုန်, ရေမွှေး, အဝတ်အထည်များ, လက်ဝတ်ရတနာ, ဆေးရွက်ကြီး, အစားအစာ, လက်ဆောင်နေ့စဉ်ကုန်စည်, အီလက်ထရောနစ်, အိမ်များထုတ်ဝေခြင်း, လက်ဆောင်ကစားစရာများ, နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ, အထူးပစ္စည်း, ပြပွဲ, ထုပ်ပိုး, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စသည်တို့.
အလွန်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု3ပုံနှိပ်ခြင်းအပါအဝင်အရည်အသွေးစစ်ဆေးနေလိုင်းများ, စစ်ဆေးနေသည့်လိုင်းအပ်နှင့်ထုပ်ပိုး, အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုသေချာစေရန်.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အာမခံထားသောအရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအပါဆုံးထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဌာနဖြစ်ပါတယ်. စက်ရုံဌာနခွဲတစ်ခုစီ၌ကျွမ်းကျင်သောအရည်အသွေးရှိသောဌာနတစ်ခုကိုထူထောင်ထားသည်; အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာအမျိုးမျိုးရှိပါသည်.
အမှာအရေအတွက်အလွန်ကြီးမားသည်မဟုတ်ပါ, ကျနော်တို့အမြန်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုထို့နောက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော TNT အဖြစ်, DHL,UPS သို့မဟုတ် FeDex စသည်.
အမိန့်ကြီးမားသည်ဆိုပါက, သင်၏လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကိုယ်စားလှယ်အားသင်၏လေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သဘောင်္ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါမည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်ပူးပေါင်းအေးဂျင့်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်.
FOB ဆိပ်ကမ်းသည် Guangzhou သို့မဟုတ် Shenzhen ဖြစ်သည်.
1.မေး: သင်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား ?
က: 100% စက်ရုံ + 10 နှစ်ပေါင်း + 5600 စတုရန်းမီတာ.
2.မေး: သငျသညျ OEM သို့မဟုတ် ODM ကိုလက်ခံနိုင်ပါသလား?
က: ဟုတ်တယ်, သင်ရုံငါတို့ဒီဇိုင်းကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ကျနော်တို့အတွင်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကားပူဇော်ပါလိမ့်မယ် 24 နာရီ.
3.မေး: သငျသညျနမူနာပေးသလား? ဒါအခမဲ့ပါလား?
က: လက်ရှိနမူနာ, ချက်ချင်းမကယ်မလွှတ်နိုင်. စိတ်ကြိုက်နမူနာနမူနာတာဝန်ခံလိုအပ်ပါတယ်, 3-7days အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်. ကုန်တင်ကုန်ကျစရိတ်သင့်ရဲ့ဘေးမှာဖြစ်လိမ့်မည်.
က: ဟုတ်တယ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင်စက္ကူထုတ်ကုန်များဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့ရှိသည်.
က: PDF,အာအိုင်,CDR,PSD,Adobe,Core IDraw, စသည်တို့.
အမှတ်အသားများ (Tags)：Kraft စက္ကူအိတ်
စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Recycle ကတ်ထူပြားစက္ကူလက်ဆောင်သေတ္တာများ Magnet နှင့်အတူဝိုင်သေတ္တာ
Fashion Style Custom Black Glossy Lamination ဖဲကြိုးနှင့်အတူ Gift Gift BagBag စျေးဝယ်ခြင်းစျေးဝယ်ခြင်း
လက်ကားဖက်ရှင်စိတ်ကြိုက်ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်စတိုးအ ၀ တ်အထည်များလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းစက္ကူအိတ်ဖြင့်ထုပ်ခြင်း
လက်ကား China Gift Shopping Craft အညိုရောင် Kraft Paper Bag
အရည်အသွေးမြင့်စက်ရုံစျေးလက်ကားအညိုရောင် Kraft Paper Bag အိတ်
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးစိတ်ကြိုက်လိုဂိုစက္ကူလက်ကိုင်နှင့်အတူအညိုရောင် Kraft Paper Bags Printed
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးစျေးပေါအရည်အသွေးမြင့်မားသောအညိုရောင် Kraft Paper Bags